Pyae Phyo (MMiTD): November 2016
Sony Xperia Z3 Plus ကတော့ အရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Z3 ကို အဆင်မြှင့်တင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပေမယ့် ဒီဇိုင်းပုံစံကို Z3 နဲ့ အရမ်းကြီးမကွာခြားပါဘူး။ ပိုမိုပါးလွှာပြီး ပိုမိုရှင်းလင်းသွားတာပဲ ရှိပါတယ်။ အရှေ့နဲ့ အနောက်မျက်နှာပြင်တွေကို Z3 ထက် ချော်ထွက်မှုနည်းအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် ကိုင်တွယ် သုံးစွဲရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Sony ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကင်မရာစွမ်းအား အထူးမြင့်မားတာကိုတွေ့ရပြီး video stabilization စနစ်နဲ့ 4K ဗီဒီယိုတွေကို ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ IP68 certified ရရှိထားပြီး ရေစိုခံနိုင်တဲ့အတွက် ရေအနက် ၁ မီတာခွဲမှာ မိနစ် ၃၀ ကြာမျှ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က 1080×1920 ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းစွမ်းအားတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ခြစ်ရာတွေကိုခံနိုင်တဲ့ မှန်နဲ့ oleophobic coating တို့ကို ထပ်မံဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လက်ချောင်း ၁၀ ချောင်းထိ တစ်ပြိုင်နက်တည်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ multitouch စနစ်လည်းပါရှိပါတယ်။ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ ဘက်ထရီကတော့ Non-removable Li-Ion 2930mAh battery ပါ။ အဖြူရောင်၊ အမဲရောင်၊ ကြေးနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်တို့ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Memory : 32 GB,3GB RAM, microSD, upto 128GB
Camera : 20.7MP, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus
Phone - 09-8617210 (CTM)
Price - 445,000 Ks
♪ “ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက် သတိပြုရမယ့်အချက် (၇) ခု” ♫
ယနေ့ခေတ်လူနေမှုဘ၀မှာ လူတွေဟာနေ့စဉ်လိုလိုအင်တာနက် အသုံးပြု နေကြပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်တွေသုံးစွဲကြ တယ်။ E-mail တွေ အသုံးပြုကြ တယ်။ သိချင်တာတွေရှာဖွေကြတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ အင်တာနက်မှာ အံ့အား သင့်ဖွယ်ရာ အဆုံး အစမဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ ပြည့်နှက်နေသလို အန္တရာယ်ပေါင်းစုံနဲ့လည်း ပြည့်နှက်နေတယ်ဆိုတာက သာဓကပေါင်းစုံနဲ့ နေ့စဉ်ကြားသိနေရပါတယ်။ ဘဏ်စာရင်းတွေ အခိုးယူခံရတယ်၊ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအချက်အလက်တွေ ခိုးယူခံရတယ်၊ ဆိုက်ဘာဘူလီလိုမျိုး အွန်လိုင်း ကနေ ခြိမ်းခြောက်အကျပ်ကိုင်ခံရ၊ ငွေညှစ်ခံရတာတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ E-mail နဲ့ လူမှုကွန်ရက် account တွေ အခိုးခံရပြီး မိမိတို့ရေးသလိုလို ကိုယ်စား စာတွေဝင်ရေးသွားတယ်၊ post တွေ ၀င်တင်သွားတယ်စသည့် ဆိုက်ဘာ ရာဇ၀တ်မှုများစွာ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကဲ့သို့သော ယခုမှ အိုင်တီနည်းပညာများစတင်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေသည့် နိုင်ငံများအဖို့ လတ်တလောကြီးမားလှသည့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများ သိပ်မကြုံရသေးပေမယ့် အနာဂတ်မှာ အကြီးအကျယ်ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အွန်လိုင်းမှာ မိမိတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကိုတတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်မှုတွေလုပ် ထားမယ်ဆိုလျှင် တော်ရုံတန်ရုံတော့ အဆိုပါကြုံတွေ့ရ မယ့် ပြဿနာများစွာကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို မျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်မလဲဆိုတာတွေထဲက အရေးအကြီးဆုံး အချက် တွေကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. အလွယ်တကူအခြားသူမသိနိုင်သည့် password များသုံးပါ
ကိုယ့်ရဲ့ password တွေက အခြားသူခန့်မှန်းလို့မရနိုင်တာတွေ ပေးသင့်ပြီး အကြီးစာလုံး၊ အသေးစာလုံး၊ ကိန်းဂဏန်း များနှင့် သင်္ကေတများစွာကို ရောထွေးသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေ၊ ၁၂၃၄ ဆိုတာမျိုးတွေ၊ မွေးသက္ကရာဇ်တွေစတဲ့ အခြားသူခန့်မှန်းရလွယ်ကူစေမယ့် password တွေ မသုံးသင့်သလို မိမိရဲ့ password ကို အခြားသူအားပြောဆိုခြင်း ကိုယ့်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာစတာတွေထဲမှာ ရေးမှတ်ထားခြင်းတွေလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ထို့အတူစာအုပ်နဲ့ ရေးမှတ်ထားခြင်းတွေလည်း မလုပ် သင့်ပါဘူး။ Account များစွာအတွက် တူညီသော password တွေကို မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး လအနည်းငယ်ကြာတဲ့ အခါတိုင်း ပုံမှန်ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ email များကို ဖုန်းနဲ့ပါ verify လုပ်ရတဲ့ 2-step verification လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
၂. လိုက်နာရန်အချက်တွေကို လက်ခံတာ၊ ပရိုဂရမ်များကို install လုပ်ရာ မှာသတိထားပါ
အကယ်၍ newsletter တွေရယူဖို့၊ ပရိုဂရမ်တွေ install ဖို့ (သို့) တစ်ခုခု အတွက် လိုက်နာရန်အချက်များကို လက်ခံ ရာမှာ သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ များစွာသော Website တွေက သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲသို့ adware များပါ တစ်ပါတည်း (မိမိ မသိလိုက်ဘဲ) ထည့်သွင်းသွားနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှု တွေနဲ့ browser မှာ ဘာတွေကြည့်တတ်သလဲဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့် တွေကို ခြေရာခံနေနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော sites တွေမှာ product တစ်ခုကိုရယူဖို့ ပုံစံဖြည့်သွင်းရာမှာ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရ မယ့်အကွက်ကို asterisk (*) နဲ့ ပြထားကြပြီး အဲဒါတွေလောက်ပဲထည့်သင့်ပါတယ်။ အခြား အကွက်တွေကို ချန်ထားခဲ့နိုင်ပါ တယ်။
၃. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို သူစိမ်းများ အား မပေးပါနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံ၊ လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်စတာတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှ သင်မသိတဲ့သူ (သို့) ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေကို မပေးသင့် ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် chat rooms တွေမှာပေါ့။ အွန်လိုင်းမှာ friends လုပ်ရာ မှာ သတိထား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် လူမှုကွန်ရက်များမှာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့အသိပုံစံမျိုး account အတုနဲ့ ပုံမှား ရိုက်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့ပါပဲ။
၄. Dating Website များစွာကိုလည်း သိပ်ယုံကြည်မှုမရှိပါနှင့်
Dating site များမှာ အမျိုးသမီးပုံများဖြင့် သွေးဆောင်ဖြားယောင်းကာ စကား ပြောလိုလျှင် ဘယ်လောက်ပေးရမည်ဆိုပြီး ပုံလှလှလေးများနဲ့ ဆွဲဆောင် ထားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကမိမိတို့ရဲ့ ငွေများကို လှည့်စားရယူနိုင်ဖို့ ထောင်ချောက်တစ်ခုပါပဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ငွေမလွှဲ ပေးပါနှင့်။ အပြင်မှာတွေ့ကြဖို့ ချိန်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရာတွင် လူစည်ကားရာ public area လိုမျိုးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာသာ ချိန်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအချက် အလက် အသေးစိတ် များဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ accounts တွေနဲ့ identity တွေကို သူစိမ်း များအားပြောဆိုခြင်း မပြုပါနှင့်။ Chat room တွေ၊ Social Media တွေနဲ့ Website တွေမှာရယူထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကနေ သင့်ရဲ့အိမ်၊ ရုံး စတာတွေအထိ လိုက်လံအန္တရာယ်ပြုတာတွေကြုံနိုင်ပါတယ်။ များစွာသော ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများက ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ကျူးလွန်လေ့ ရှိပါတယ်။ အထူး သဖြင့် မသိနားမလည်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်များ၊ ဆယ်ကျော်သက်များအဖို့ ဒီလိုမျိုး ကျူးလွန်ခံရနိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ မိမိတို့အွန်လိုင်းမှာဝယ်ယူ မယ့် Online Shopping site တွေဟာ အတုလား အစစ်လားဆိုတာသတိပြု ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pop ups ကနေ ကြော်ငြာသဘောတက်လာတဲ့ site တွေကို မယုံကြည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅. အတုအယောင်ဖြစ်တဲ့ Phishing လုပ်မှုများကို သတိထားပါ
ကိုယ့်ရဲ့ mail ထဲကို phishing e-mails တွေဝင်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ သင်စာရင်းဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ် (သို့) သင်ဈေးဝယ်လေ့ရှိတဲ့ ဆိုင်တွေကနေပို့တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ယုံကြည်ရလောက်အောင် ယုတ္တိရှိရှိ စာတွေရေးသားထားပြီး website အတုတစ်ခုသို့ link ပေးကာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များစွာကို ဖြည့်သွင်းခိုင်းပြီး ခိုးယူသွားတာပါပဲ။ Gmail ထဲကို sign in ၀င်တဲ့ interface နဲ့ တစ်ထေရာတည်းတူတဲ့ page အတုတွေကနေသင့်ရဲ့ gmail account တွေကို လည်းခိုးယူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ mail များထဲမှာပါဝင်တဲ့ တစ်ခုခုကိုနှိပ်ဖို့ (attachment လိုမျိုး) ညွှန်ကြားထားလျှင် မနှိပ်မိပါစေနှင့်။ အဲဒီကနေ spyware လိုမျိုးတွေတင်သွားတတ်ပါတယ်။ သင်ကဘယ်နှယောက်မြောက် user ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါ်လာဘယ်နှသန်းရမယ်၊ ပြည်ပက ထီကို ၀င်ရောက် ကံစမ်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်တာစတာတွေကို မယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၆. လူမှုကွန်ရက်များမှာ သင့်အကြောင်းအချက်အလက်ဖြည့်သွင်းမှုများကို ကန့်သတ်ထားပါ။
Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn နှင့် အခြားသော social media တွေဟာ ဒီနေ့လူတွေတော် တော်များများ အသုံးပြုနေကြ ပါတယ်။ Facebook မှာဆိုလျှင် ကိုယ့်ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အခြားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များစွာ ဖြည့်သွင်း ရပါတယ်။ အဆိုပါအချက်အလက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြားသူများ မသိ စေရန် ကန့်သတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်တင်လိုက်တဲ့ သင့်အိမ်အတွင်းက ပုံတွေ၊ သင်သွားလေ့ ရှိတဲ့နေရာတွေ၊ သင့်မိသားစုဝင် တွေရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ အမူအကျင့်တွေအားလုံးကို တွက်ချက်ကာ လူမှု ကွန်ရက်ပေါ်က သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကနေတစ်ဆင့် ဖောက်ထွင်းမှု လိုမျိုး၊ လိမ်လည်မှုလိုမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို လူမှုကွန်ရက် တွေမှာ တင်မယ် ဆိုလျှင်သတိထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကို အမြင့်ဆုံးထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေနဲ့ account အတုလုပ်ကာ သင့်ကိုယ်စား လိမ်လည်မှုတွေလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
၇. E-mail accounts များစွာထားပါ
E-mail accounts က သုံးခုလောက်ထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ပတ်သက်တာ စသဖြင့်ခွဲခြားထား သင့်ပါတယ်။ Business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ email ကတော့ သင့်အလုပ်ခွင်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေမှာ သုံးသင့် ပါတယ်။ ပင်မ email ကတော့ ဘဏ်မှာဖြည့် တာ၊ အလုပ်ရှာတာ၊ အာမခံထားတာတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ် email ကတော့ online store တွေမှာ ၀ယ်ယူတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ သုံးစွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်တာနက်မှာ ဖြည့်သွင်းရတာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စတဲ့ email ဖြည့်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် သုံးသင့်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုလျှင်တော့ အခြေခံ အားဖြင့် လုံလောက်သွားပြီဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာတွေမှာ antivirus ပရိုဂရမ်တွေ၊ anti-spyware program တွေနဲ့ firewall တွေ တင်ထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Wireless Router ကိုလည်း လုံခြုံမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Public Wireless Network တွေမှာ သုံးစွဲ တဲ့အခါ File sharing and network discovery ကို turn off လုပ်ထားရမှာပါ။ သိပ်မယုံကြည်ရတဲ့ source တွေကနေ download ချတာတွေ မလုပ်ဆောင် သင့် ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးက အလွန်တရာ အရေးကြီးလာပြီဖြစ်လို့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ရှာဖွေလေ့လာရင်း လိုက်နာကြမယ်ဆိုလျှင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာ များစွာ အား ကြိုတင် ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။
♪ US မှာ ဒေါ်လာ(၂၀၀)အောက်အထိ ဈေးကျသွားတဲ့ Asus Zenfone Zoom ♫
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက US မှာ ဒေါ်လာ(၄၀၀)နဲ့ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Asus Zenfone Zoom ဟာ အခုအချိန်မှာတော့ ဒေါ်လာ(၂၀၀) အောက်အထိ ဈေးကျသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Specs တွေကတော့ …
3 GHz Intel Z3580 Quad-Core CPU
5″ 1920 x 1080 TFT LCD Display
Android 5.0 Lollipop နဲ့ ထွက်ရှိလာပေမယ့် Marshmallow တင်ပြီး အသုံးပြုလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Display ရုပ်ထွက်နဲ့ Camera ပိုင်းအထူးကောင်းမွန်တဲ့အပြင် 3x Optical Zoom ပါဝင်တဲ့ အပါးဆုံး စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-81 (28.11.16) ♫
Mobile Guide ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ကို ဖတ်ချင်သူများအတွက် မူရင်းဆိုဒ်ကနေပြီးဒေါင်းလုပ်လင့်ကို တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol (3), Issue (081) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ဂျာနယ်ကို 28-Nov ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကို ၀ယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင်မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြ ပါစေဗျာ။
♪ အင်တာနက်ဂျာနယ် (28.11.16) အတွဲ (17)၊ အမှတ် (46) ♫
အင်တာနက် ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အင်တာနက် ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ အင်တာနက် ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ အင်တာနက် အတွဲ (17) အမှတ် (46) ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Nov-28 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသော နေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဓာတ်ပုံတွေကို ပြုပြင်နိုင်တဲ့ - Real Rage 5.965 APK
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဓာတ်ပုံတွေကို ပုံစံပေါင်းများစွာလက်တွေ့ ပြုပြင်နိုင်သုံး ဆော့လ်ဝ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရယ်စရာ ကောင်းသောပုံစံ နောက်ပြီး ထူးခြားသောပုံစံတွေကို အစားထိုး နိုင်တဲ့ Application ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပုံစံတွေ ဆံပင် အရောင် တွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ့်ကတော့ 7.87MB ဖြစ်ပြီး Android OS 2.3 အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Lenovo သည်လည်း ဟန်းဆက်များကို Series အလိုက် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Vibe P1 သည် 2G, 3G, 4G Network များကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဟန်းဆက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဟာ ထိပ်ဘက်ထောင့်များတွင် အ၀န်း အ၀ိုက်ပုံစံ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့အရွယ်အစားပမာဏကတော့ 152.9 x 75.6 x 9.9 mm ရှိပြီး အလေးချိန်သည် 189g ဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်းကတ် နှစ်ကတ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းအသုံးပြု ရမယ့် ဆင်းကတ်ကတော့ Nano Sim ပါ။ IPS Capacitive Touchscreen ရဲ့ အကျယ်အ၀န်းပမာဏကတော့ 5.5 inches ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကို အသုံးပြုတဲ့အခါ တွင် ပုံရိပ်များကို ကျယ်ဝန်းစွာ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ မြင်ကွင်းစွမ်းရည်အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားသော Pixels ပမာဏ ကတော့ Pixels ပါ။ တစ်လက်မမှာရှိမယ့် Pixel ပမာဏ သိပ်သည်းဆသည် 401 ppi ဖြစ်ပါတယ်။ Multitouch စနစ်တွင် လက်ချောင်းဆယ်ချောင်း အထက် အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင် အကြမ်းခံစေဖို့အတွက်လည်း Gorilla Glass3ဖုံးအုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။
အဓိက ကင်မရာဟာ 13MP စွမ်းရည်ရှိပြီး ရှေ့ကင်မရာငယ်ကတော့ 5MP စွမ်းရည်ပါ။ dual - LED (dual tone) flash လည်းပါရှိပါသေးတယ်။ မှတ်ဥာဏ်ပမာဏအပိုင်းတွင် RAM ကို 2GB ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Internal Storage တွင် 32GB ပါရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ အချက် အလက် အများအပြား သိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Cardslot စနစ်ပါရှိ ပါသေးတယ်။ ထည့်သွင်းပေးထားသော Chipset အမျိုးအစားကတော့ Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 ဖြစ်ပါတယ်။ CPU ရဲ့ စွမ်းရည် မှာ Quad-core 1.5 GHz Cortex A53& quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 ဖြစ်ပြီး GPU မှာ Adreno 405 ပါ။ ထည့်သွင်းပေးထားသော ဘက်ထရီ အမျိုးအစားမှာ Li-Po 5000 mAh ဖြစ်ပြီး 3G Network တွင် စကားပြော ဆိုဖို့အတွက် ၄၄ နာရီနီးပါး ခံနိုင်စွမ်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Processor - Quad Core 1.5 GHz, QC 1GHz